६५ वर्षमा गाडी भाडा उठाउँदै – Chitwan Post
प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस २६, २०७४
अन्तर्वार्ता, समाचार, समाज
भरतपुर महानगर–६ गीतानगर बस्ने रामप्रसाद मिश्र उमेरले ६५ वर्ष टेके । पहाड घर नुवाकोट कविलास भएका मिश्र २०२८ सालमा गीतानगर आएका हुन् । जिन्दगीको लामो अनुभव मिल सम्बन्धी छ । उमेर छँदा मिल चलाएर बसेका मिश्र अहिले परिस्थितिबस बसमा भाडा उठाउँदै हिड्छन् । उनका श्रीमती ३ छोरा, बुहारी र नातीनातिना रहेका छन् । गाडीमा भाडा उठाउने र सहचालकको भूमिकामा रहनेलाई आममानिसहरु त्यति वास्ता गर्दैनन् । प्रत्येक यात्रुसँग बोल्नुपर्ने, कतिपय अवस्थामा पैसाको लागि झगडासमेत गर्नुपर्ने पेसामा जिन्दगीको उत्तरार्धमा टेक्दै गर्दा मिश्रले नयाँ अनुभव संगालिरहेका छन् । बुढेसकालमा उनको कमाइ खाने साधन बनेको छ, गाडी नम्बर ना. ३ ख ८८६३ । निरन्तर संघर्षमा जीवन बिताइरहेका उनै रामप्रसाद मिश्रसँग चितवन पोष्ट वरिष्ठ संवाददाता दिपेन्द्र अधिकारीले गरेको कुराकानी ।
ढाकाटोपी सधै लगाउनुहुन्छ ?
लगाउँछु । यो शीरको शोभा मात्रै होइन, हामी नेपालीको इज्ज्यत र मानप्रतिष्ठा पनि जोडिएको विषय हो । सुत्ने बेलामा फुकाउँछु नत्र सधैँ लगाउँछु ।
कति भयो गाडी लाइनमा हिड्न थालेको ?
गत वैशाखबाट हो । छोराहरु सबै आ आफ्नै काममा व्यस्त छन् । घरको गाडी अरुको भरमा छाड्न भएन, त्यसैले मै बुढो सधैँ गाडीमै हिँडिरहेको हुन्छु ।
कुन रुटमा चल्ने गाडी हो ?
नारायणगढ–जगतपुर हो सर ।
दिनमा कति कमाइ हुन्छ ?
कति हुनु अलिअलि । घर परिवारलाई भातसम्म खान पुगेको छ । खासै कमाइ छैन । बाटोको अवस्था खराब छ । गाडी बिग्रिरहन्छ । तेलको भाउ बढिरहन्छ । समस्या नै छ ।
पहिले के काम गरिन्थ्यो ?
२८ सालमा चितवन झरेदेखि नै मैले मिल सम्बन्धी काम गरे । मलाइ यति धेरै अनुभव छ की म हेरेरै कति धानको कति चामल, कति तोरीको कति तेल निस्कन्छ भन्न सक्छु । त्यतिखेर मैले काम गर्दा दिनको एक रूपैयाँ कमाइ थियो ।
भाडा उठाउँदा झगडा हुन्न ?
त्यो त मान्छेमा भर पर्ने कुरा हो । गाडीमा सहयोगी पनि राखेको छु । उसले बढी जसो भाडा उठाउँछ । उ नभएको बेलामा र कसैसँग झगडा पर्न थाल्यो भने म अघि सर्छु । म मिलाउँछु पनि । केटाहरु अलि झगडीया हुन्छन् । ढिपी गर्छन् । तर, भाडाकै कारणले हात हालाहाल हुने, बद्नाम हुने काम म बाट हुन्न । मेरो सहयोगीलाई पनि बाबु राम्ररी बोल्नु भन्छु । कोही कोही भाडा नभएकाहरु त्यतिकै झोकिन्छन् । अनावश्यक निहूँ खोज्छन् पनि । तर म शान्त भइदिन्छु, हाँसीहाँसी कुरा गर्छु त्यसैले अहिले सम्म कोहीकसैसँग नराम्रो भन्ने छैन ।
सरकारप्रति गुनासो ?
मेरो केही भन्नु छैन । आफ्नो गरेको छु, खाछु । सरकार आफ्नै काम गरिरहन्छ । मैले पनि पञ्चायतदेखि नै भोट हाल्दै आको हुँ । परिवर्तन हुन्छ भन्छन्, हाम्रो पालामा होला जस्तो छैन । जे भएपनि देश नबेचिदिए हुन्थ्यो । अहिले त पार्टीहरु मिलेको भन्छन् , हेरम के गर्छन् । आफ्नै देशमा उद्यम, कलकारखाना नभएसम्म प्रगति हुँदैन ।
नयाँ सरकारबाट केही आशा गर्नुभएको छ ?
देशमा शान्ति सु–व्यवस्था हुनुप¥यो । हामी जस्तो गरिखानेले सधै सजिलै गरिखान पाउनु प¥यो । दुःख गरेर आफ्नो पेट पाल्छु भन्दा पनि पाइदनै यसमै दुःख लाग्छ । म त भन्छु गरि खान देऊ । हत्या हिंसा मारपीट, कुटपीट नगर । मित्रभाव जगाउनुपर्छ ।
मध्यबिन्दुमा चिसोले एकको मृत्यु